नारायणकाजी श्रेष्ठले गुट चलाउदै पहिला माओबादी केन्द्र सिध्यायो ! अब नेकपा सिध्याउँछ!’-डा. बाबुराम भट्टराई «
नारायणकाजी श्रेष्ठले गुट चलाउदै पहिला माओबादी केन्द्र सिध्यायो ! अब नेकपा सिध्याउँछ!’-डा. बाबुराम भट्टराई
प्रकाशित मिति : 19 March, 2020 1:08 pm
काठामाण्डौ- नारायणकाजी श्रेष्ठले गुट चलाउने हो ! माओबादी केन्द्र सिध्यायो ! अब नेकपा सिध्याउँछ!’ भनेर पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले अभिव्यक्ति दिएका छन्। नेकपा प्रवक्ता श्रेष्ठ र पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई दुवैको गृहजिल्ला गोरखा हो। गोरखाको राजनीतिमा यी दुईबीच कडा वाद-प्रतिवाद हुने गरेको छ। गत प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा गोरखा क्षेत्र नम्बर २ बाट डा. भट्टराईले प्रतिष्पर्धी श्रेष्ठलाई पराजित गरेका थिए।
बाबुरामले ट्वीटमा लेखेका छन्, ‘उहिलेका श्री ३ ले अहिलेका श्री ३ झैं अघिल्लो दिन हैन, केही दिन पहिल्यै परी़क्षा रोके होलान्‌!, ती कुरो केही दिनअघि गरेको भए विद्यार्थीअभिभावक कति तनावमुक्त हुन्थे ? कति खर्च बच्थ्यो ? यो काजी गुटको काम सधैं शिक्षा वा स्वास्थ्य मन्त्रालय लिने; गुट चलाउने हो ! माके सिध्यायो! अब नेकपा सिध्याउँछ!’ इन्टरनेट सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा बिहीबार बिहान एक ट्वीट गर्दै डा. भट्टराईले कोरोना भाइरसका कारण परीक्षा रोक्ने शिक्षामन्त्री गिरीराजमणि पोखेरलको निर्णयमाथि प्रश्न उठाउँदै नेकपा प्रवक्ता श्रेष्ठमाथि प्रहार गरेका हुन्।
श्रेष्ठको समूह माओवादी प्रवेश गरेयता सो पार्टी पटक-पटक विभाजन भएको थियो। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ का युद्धकालिन सहयात्रीहरू मोहन वैद्य ‘किरण’, डा. बाबुराम भट्टराई र नेत्रबिक्रम चन्द ‘विप्लव’ले अहिले अलग-अलग दलमार्फत आफ्ना गतिविधी सञ्चालन गरिरहेका छन्‌। वर्तमान सरकारमा उनै नारायणकाजी श्रेष्ठसँगै माओवादी प्रवेश गरेका नेता गिरीराजमणि पोखरेल शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री छन्‌। कोरोना संक्रमणका कारण परीक्षा स्थगित गर्ने निर्णय ढिला गरि लिएको र टाढाबाट परीक्षाका लागि तयारी आएका विद्यार्थीमाथि थप तनाव भएको भन्दै शिक्षामन्त्री पोखरेलको आलोचना भइरहेको छ।
मोहनविक्रम सिंह नेतृत्वको तत्कालीन नेकपा मसालमा रहेर माओवादी जनयुद्धविरूद्ध आलोचना गर्ने गरेका नारायणकाजी श्रेष्ठको खेमा शान्तिप्रकृया शुरू भएपछि २०६५ पुसमा तत्कालीन नेकपा माओवादीमा प्रवेश गरेको थियो। पार्टी एकीकरणपछि सो खेमाले साविकको माओवादी र हालको सत्तारूढ नेकपाभित्र पटक-पटक अवसर पाइरहेको छ।
एसईई परीक्षा रोक्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जारी गरेको सूचना
36 Viewsखोटाङ, २३ चैत मुग्लानीखबर/खोटाङको केपिलासगढी गाउँपालिका र ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको सिमानास्थित रावाखोलामा दुवाली छेकेर माछा